I-China 90% -99.9999% Ukucoceka kunye nokuBanzi kwePSA yeNitrogen Generator abavelisi kunye nabathengisi | OKANYE
Ucoceko kunye nomthamo omkhulu we-PSA Nitrogen Generator
I-PSA Nitrogen Plant yamkela umgaqo wokuba phantsi koxinzelelo oluthile, isantya sokusasazeka kweoksijini kunye ne-nitrogen sahluke kakhulu kwisisefe sekhabhoni yemolekyuli. Ngethuba elifutshane, imolekyuli yeoksijini ifakwa kwisisele sekharbhon kodwa initrogen inokudlula kwisingqengqelo sebhedi yemolekyuli ukwahlula ioksijini kunye nenitrogen.
Emva kwenkqubo yokufakwa kwintengiso, isisele sekhabhoni yemolekyuli iya kuphinda ihlaziye ngokudakumba kunye nokususa ioksijini kwioksijini.
Isityalo sethu se-PSA Nitrogen sixhotyiswe nge-2 adsorbers, enye kwi-adsorption ukuvelisa i-nitrogen, enye kwi-desorption yokuhlaziya isisefo seemolekyuli. I-adsorbers ezimbini zisebenza ngokunye ukuvelisa imveliso ye-nitrogen ngokuqhubekayo.
1: Izixhobo zinezibonelelo zokusebenzisa amandla asezantsi, ixabiso eliphantsi, ukuqina okunamandla, ukuvelisa irhasi ngokukhawuleza kunye nohlengahlengiso olulula lobunyulu.
2: Inkqubo yoyilo egqibeleleyo kunye nesiphumo sokusetyenziswa;
Uyilo lweemodyuli luyilelwe ukugcina indawo yomhlaba.
I-4: Umsebenzi ulula, ukusebenza kuzinzile, inqanaba lokuzenzekelayo liphezulu, kwaye linokufezekiswa ngaphandle kokusebenza.
I-5: Izinto zangaphakathi ezinengqiqo, ukuhanjiswa komoya okufanayo, kunye nokunciphisa isantya esiphezulu sokuhamba komoya;
I-6: Amanyathelo okhuselo akhethekileyo e-carbon molecular ukukhulisa ubomi be-carbon molecularsieve.
I-7: Izinto eziphambili zeempawu ezidumileyo sisiqinisekiso esisebenzayo somgangatho wezixhobo.
8: Isixhobo sokukhuphela esizenzekelayo setekhnoloji yelungelo elilodwa lomenzi siqinisekisa umgangatho wenitrogen weemveliso ezigqityiweyo.
9: Inemisebenzi emininzi yokufumanisa isifo, i-alamu kunye nokusebenza okuzenzekelayo.
I-10: Ukuboniswa okukhethiweyo kwescreen sokubonisa, ukubonwa kwendawo yamazolo, ulawulo lokonga umbane, unxibelelwano lweDCS njalo njalo.
Egqithileyo Isixhobo seLNG seNitrogen Generator yezixhobo zeMveliso yeNitrogen
Okulandelayo: Umatshini wokuvelisa i-nitrojeni we-PSA kwimveliso yentengiso yeNitrogen Ukwenza Umatshini
Psa Oxygen Ukuzalisa iOxygen Generator
Isikali Industrial PSA Oxygen Concentrator Oksijini ...
Ukucaciswa kwemveliso (Nm³ / h) Ukusetyenziswa kwegesi okusebenzayo (Nm³ / h) inkqubo yokucoca umoya ORO-5 5 1.25 KJ-1.2 ORO-10 10 2.5 KJ-3 ORO-20 20 5.0 KJ-6 ORO-40 40 10 KJ-10 I-ORO-60 60 15 KJ-15 ORO-80 80 20 KJ-20 ORO-100 100 25 KJ-30 ORO-150 150 38 KJ-40 ORO-200 200 50 KJ-50 Senza kwaye sithumela ngaphandle isityalo seoksijini esizenzekelayo kunye nenitrogen Utyalo lokugcwalisa isilinda ngela ...